#खेलकुद Archives - Sawal Nepal
Tag Archives: #खेलकुद
नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वप्रशिक्षकको निधन
नेपाल क्रिकेट संघले पूर्वप्रशिक्षक अफ्ताब बालोचको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । सोमबार नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वप्रशिक्षक अफ्ताबको ६८ वर्षको उमेरमा निधन भएको पाकिस्ता क्रिकेट बोर्डले पुष्टि गरेको छ । उहाँको निधनप्रति नेपाललले आज श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको हो । अफ्ताब सन् २००१ मा नेपालको प्रशिक्षकको रुपमा नेपाल आएका थिए । उनको प्रशिक्षणमा नेपालले यु-१७ एसिया
नेपाल र माेरिससकाे खेल कान्तिपुरले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने
आसन्न नेपाल र मोरिससको खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने भएको छ । जनवरी २९ र फेब्रेवरी एक तारिखमा हुने दुई वटा मैत्रीपुर्ण खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण अधिकार कान्तिपुरले पाएको छ । कान्तिपुर र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाविच आधिकारीक रुपमा सहमती भएको बताइएको छ । हाल ए डिभिजन लिगको समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेको कान्तिपुरलाई नै
प्रधानमन्त्रीकप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब फाइनल प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा पुलिसले बागमतीमाथि ५१ रनको प्रभावशाली जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पुलिसको जितमा पवन सराफ र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिसका लागि पवन सराफले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दा ऐरीको जादुमय बलिङमा बागमती निरीह रह्यो। सराफले
अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक जोकोभिचको भिसा रद्द गर्‍यो
अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक नाभाक जाकोभिचको भिसा रद्द गरेको छ । शुक्रबार विश्वकै नम्बर एक टेनिस प्लेयरले खोप नलगाएको भन्दै समुदायलाई जोखिम पुर्याउन सक्ने अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक उनको भिसा रद्द गरेको हो । अध्यागमन मन्त्री एलेक्स हकले जोकोभिचको भिसा फेरि रद्द गर्न थप शक्ति प्रयोग गर्दै उनको भिसा रद्द गरेको हो । यसअघि आफ्नो भिसा जोगाउन
नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप टी–ट्वान्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जीत दर्ता गराएको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको समूह ‘ए’अन्तर्गतको खेलमा पुलिस क्लबले कर्णालीलाई ८९ रनले पराजित गरेको हो। पुलिसले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई २ रनले तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ४ विकेटले हराएको थियो। जीतसँगै पुलिस सेमिफाइनल नजिक पुगेको
क्रिस मोरिसले लिए क्रिकेटबाट सन्‍न्यास
दक्षिण अफ्रिकाका अलराउन्डर क्रिस मोरिसले क्रिकेटबाट सन्यास लिएमोरिसले दक्षिण अफ्रिकाका लागि चार टेस्ट, ४२ एकदिवसीय र २३ टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् ।३४ वर्षीय मोरिसले सन् २०१२ मा जिम्बावेविरुद्धको टि-२० खेलमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यु गरेका थिए । उनले अन्तिम टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय सन् २०१९ मा श्रीलंकाविरुद्ध खेलेका थिए । माेरिसले टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा १ अर्धशकसहित १३३ रन
जितेन्द्रको उत्कृष्ट बलिङमा त्रिभुवन आर्मीको सानदार जित
मध्यम गतिका बलर जितेन्द्र मुखियाले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेपछि त्रिभुवन आर्मीले सोमबार कर्णाली प्रदेशलाई ६३ रनले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्यटिङ गरेको त्रिभुवन आर्मीले १९.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ११६ रन बनाएको हो । ११७ रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले १४.४ ओभरमा
पुष्पाले बंगलादेशमा जितिन् काश्य पदक
नेपाली धाविका पुष्पा भण्डारीले सोमबार बंगलादेशमा सम्पन्न बंगबन्धु शेख मुजीव ढाका म्याराथन–२०२२ मा काश्य पदक जितेकी छन् । दक्षिण एसियाली (साफ) स्पर्धामा पुष्पाले दुई घण्टा ५७ मिनेट ३५ सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पार गरेकी थिइन् । गतवर्ष पुष्पा यही स्पर्धामा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् । गतवर्ष पुष्पाले निर्धारित दूरी दुई घण्टा ५९ मिनेट ४१ सेकेण्डमा पूरा
बार्सिलोनाका कोटिन्हो लोनमा एस्टन भिल्लाबाट खेल्ने
बार्सिलोनाका ब्राजिलियन अट्याकिंग मिडफिल्डर फिलिप कोटिन्हो प्रिमियर लिग क्लब एस्टन भिल्ला आउने भएका छन् । कोटिन्हो बार्सिलोना छोडेर लोनमा भिल्लामा आउने निश्चित भएको हो । बार्सिलोनामा खेल्ने समय नपाएका कारण असन्तुष्ट रहेका कोटिन्हो नयाँ प्रशिक्षक जाभी आएपछि पनि प्राथमिकतामा परेका थिएनन् । कोटिन्हो यस सिजनको अन्त्यसम्म एस्टन भिल्लाबाट खेल्ने छन् । लोन सम्झौतामा कोटिन्होको पारिश्रमिक
क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘सधैँ कप्तान हुन आएको पनि होइन, हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन’
नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निवर्तमान कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफू सधैँ कप्तान हुन आएको पनि हैन र हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता पनि नभएको बताएका छन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट खेल मैदानमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले क्यान र खेलाडीबीचको विवाद समाधानपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘म सधैँलाई कप्तान हुन आएको पनि होइन र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन
एकैदिन चट्याङ्ग लागेर २ मृत्यु, १३ जना घाइते
कस्तो छ आजको मौसम ? कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?
तपाईको आज : २०७९ असार २१ गते मंगलवारको दैनिक राशिफल
झापाका पेट्रोल पम्पहरूमा श्रृंखलाबद्ध चोरी, घटनामा संलग्न तामाङ पक्राउ